Sawubona futhi ngiyabonga ngokuvakasha kwakho! - Ukuhlela ukusebenza kwe - "www.amp-cloud.de", amakhukhi ayasetshenziswa. Lokhu kungafaka nezinsizakalo nokuqukethwe okuvela kubahlinzeki abavela eceleni, isb.ukuhlinzeka ngemisebenzi yezokuxhumana noma okuqukethwe kwevidiyo, kepha futhi nokunika amandla ukucutshungulwa okungaziwa, kwezibalo kokusebenza kwewebhusayithi ukuthi kuthuthukiswe futhi kukhokhelwe iwebhusayithi ukuze kube nokuqhubeka kwaleli khasi Ukusekelwa kohlangothi. Ngokuya ngomsebenzi, idatha engabelwa wena ingadluliselwa kubantu besithathu futhi icutshungulwe yibo. Ungathola okuningi ngokusetshenziswa nezinketho zokushintsha amasethingi akho amakhukhi lapha: Imininingwane yokuvikelwa kwedatha